Allgedo.com » 2013 » February » 15
Home » Archive Daily February 15th, 2013
Message on the inauguration of the training course for Somali robust police by Italian Carabinieri (Pictues)
Office of the Ambassador and Special Delegate of the Italian Government to the Somali Republic Nairobi, 14th February 2013 – The Ambassador and Special Delegate of the Italian Government to the Somali Republic, Mr. Andrea Mazzella, welcomes the inauguration of the training course for robust police carried out by the Italian Carabinieri for 200 Somali Police men and women. The Italian Carabinieri,...
Allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada Garoowe ee dalka Soomaaliya lagu dilay Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax oo ka mid ahaa culimada ugu waaweyn dalka Soomaaliya. Sheekha ayaa sida la sheegay waxaa maanta oo Jimca ah uu wiil dhalinyaro ah oo lasoo qalday uu si naxariis daro ah ugu dilay masjid dhexdiis, ayada oo kaaga sii darane uu Sheekhu hor taagnaa Rabbi CW oo salaaddii casir tukanayay. Haddaba,...
Wacyi-Gelin Diini ah: Salaadda iyo faa’idadeeda.
Duuliye Asli Xasan Cabaade “CALANSIDA” ayaa salaadda faa’iidada ay inoo leedahay xusuusineysa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa. Salaadda iyo Faa’iidadeeda. Soomaalaay, waxaan isku dayay wacyi-gelinta ku dheehan waddaninnimada inaan badiyo, waxaanse go’aansaday inaan ku daro wacyi-gelin Diini ah, bal inuu Ilaahay s.w.t. quluubtooda baddalo, Isagaa Muqallibal-Quluub...
Dabley Hubaysan oo Magaalada Garowe ku dishey Sh.C/qaadir Nuur Faarax oo ka mid ah Culimada Soomaaliyeed.
Kooxo Bustoolado ku hubeysan ayaa maanta masjid kuyaala magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ku dilay Sheekh C/qaadir Nuur Faarax Gacameey oo ahaa Sheekh si weyn looga yaqaan deegaanada Puntland. Sheekh C/qaadir ayaa ka mid ahaa culumada ugu caansan dalka gaar ahaan deegaanada Putland waxaana la sheegay in si weyn looga qadirinjiray deegaanadaas . Saraakiil ka tirsan Maamulka Puntland ayaa xaqiijiyey...
Faah faahin dheeri oo ka soo baxaysa Dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan Gobolka Bari
Faah faahintaan dheeraadka ah ayaa ka soo bexeysaa Dagaalo khasaaro geestay oo Deegaanka Ceelaanyo oo ku yaala Galbeedka Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari.ku dhexmarey Ciidamada Puntland iyo Xarakada Al Shabaab. Inta la ogyahay Tirada ku dhimatay Dagaalkaasi ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in ay Gaarayaan illaa 13 Ruux oo ah dhinacyadii dagaalamayay , iyadoo aaney jirin wax war ah oo ka soo baxay...
Xarakada Alshabaab oo Sheegtay in ay Dileen Mid ka mid ah Ajaanib Gacan tooda ku jirey
Warsaxaafadeed kasoo baxay Alshabaab ayaa lagu sheegay in dil lagu xukumay mid ka mid ah askar Kenyan ah oo gacanta ugu jiro ciidamada ururka Alshabaab. Warsaxafadeedka ayaa lagu sheegay in Alshabaab waqtigii ay u qabteen dowlada Kenya uu dhamaatay islamarkaana lagu riday askariga Jonathan Kipkosgei Kangogo xukun dil ah. Alshabaab ayaa sheegay inay fursad kale siiyeen dowlada Kenya kaasi oo ku aadanaa...
Dowlada Soomaaliya oo Mar kale ku Celisey in laga Qaado Cuna qabateenta Hubka
Kulan ay sheegeen golaha amaanka ee qaramada Midoobay ayaa waxaa looga hadlay xaalada dalka Soomaaliya,waxaana kulankaasi Soomaaliya u matalayay wasiirka arimaha dibada xukuumada Soomaaliya. Kulanka oo ka dhacay magaalada New York ayaa waxaa qudbad dheer ka jeediyay xoghayaha guud ee qaramada midoobay Ban ki Moon ,isagoo ka hadlay xaalada Dalka Soomaaliya ee ku tilaabsanaya horumarka balaaran. Wasiirka...